अनुहारमा गहिरो दाग बसेर हैरान हुनुहुन्छ ? त्यसो भए अपनाउनुहोस यि घरेलु उपाए ! – दैनिक नेपाल न्युज
काठमाडौँ । गालामा देखिने गहिरो दाग हटाउन बेसनको प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसका लागि दूध, बेसन र कागतीको रसको मिश्रण गराई तयार भएको पेस्टलाई अनुहारमा लगाउनुपर्छ । यसलाई अनुहारमा आधा घन्टासम्म राखेर सुक्न दिनुपर्छ र त्यतिवेलासम्म अनुहार चलाउन पनि हुँदैन । त्यसपछि पखाल्न सकिन्छ ।
यस्ता दाग हटाउन दहीको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । एक कचौरा दही र कागतीको रस मिलाएर पहिला पेस्ट बनाउनुपर्छ । र, त्यसलाई अनुहारमा लगाउनुपर्छ । अर्को आइडिया भनेको कागती र महलाई बराबर मात्रामा मिश्रण गराउने र यस्तो मिश्रणलाई दुईदेखि तीन मिनेटसम्म अनुहारमा लगाउनुपर्छ ।
जसले छालालाई नरम बनाउँछ र अनुहारको दाग–धब्बा हट्न मद्दत पुग्छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ । बेसारमा पाइने एन्टिब्याक्टेरियल गुण स्किनका लागि निकै उपयोगी हुन्छ । त्यसैले सस्र्यूंको तेलमा बेसार पकाएर अनुहारमा लगाउँदा अनुहारको दाग–धब्बा हटेर जान्छ ।